Yusuf Garaad: Jawaabta Koowaad ee Soomaaliya
Mona waxay sheegtay in ay Soomaaliya is xakameysay, oo ay ka gaabsatay in ay wax howl ah ka fuliso aag badeedka ay Kenya nagu sheeganeyso. Waxaa wax laga xumaada ah, ayay tiri Mona, in taas cagisgeed ay Kenya u dhaqantay sidii iyada oo aagga ay iyadu leedahay. Waxay heshiisyo la gashay sharikado shidaalka baara oo haddadaas ku guda jira baaritaan kheraad ay u baadi goobayaan Kenya.
MoU - Soomaaliya iyo Kenya
Reichler wuxuu sheegay in heshiiskan oo ay diyaarisay Norway ay marka hore kala hadashay Ra’iisal Wasaare Ku Xigeenka Soomaaliya, ka dibna ay Soomaaliya codsatay in cinwaanka wax laga beddelo. Ra’iisal Wasaare Ku Xigeenku wuxuu email uu u diray Danjiraha Norway uga mahadceliyay in ay qabatay howl uu yiri waxay ahayd in aan annagu qabsanno. Waxaa la soo bandhigay email uu diray Ra'iisal Wasaare-ku-xigeenku.
Qareennada Soomaaliya waxaa hadalkooda soo gunaanaday Prof. Philippe Sands. Isaga oo hadalkiisa ku wajahaya Guddoomiyaha Maxkamadda Caalamiga ah ee Caddaaladda wuxuu yiri, waxaan rajeynayaa in diidmada hordhaca ah ee Kenya aad u aragto waxa ay tahay; taas oo ah in ay dooneyso in ay sii dheereyso xaalad aan caddaalad ku dhisneyn oo bilaa mada' ah. Kenya waxaa ay dooneysaa in ay dacwadda is hortaagto si ay u furto wadahadal aan dhammaad lahayn, muhiimad looga qeyb galaana aanay jirin.
Posted by Yusuf Garaad at 15:35:00